Anambra Police: NBA sị na ha ga-ahụ isi ya maka dukaduka a kụrụ onye otu ha - BBC News Ìgbò
Anambra Police: NBA sị na ha ga-ahụ isi ya maka dukaduka a kụrụ onye otu ha
12 Ọktoba 2019
Image copyright Ogbonnaya Obasi
Otu jikọrọ ndị okaikpe na Naịjirịa bụ Nigerian Bar Association (NBA) agbarụọla ihu maka onye otu ha ndị uweojii kụrụ dukaduka n'Ọnicha ụnyahụ bụ Fraịda.
N'akwụkwọ odeakwụkwọ mgbasaozi ndị otu a bụ Kunle Edun tinyere aka, ndị otu a sị na agwa ndị uweojii ahụ kpasara ya bụ nwaamadị aha bụ Ogbonnaya Jacoab Obasi jọgburu udele ma sigbuo nkakwụ nke bụ na ọ kpụrụ ugwu ha n'ala dịka ndị okaikpe.
Ndị uweojii agbagbuola nwa agbọghọ
Ihe ndị uweojii kwuru maka nwaamadị agbagburu n'Aba
Dịka ọ dere, onyeisi ndị otu a n'Onicha bụ Ozoemena Erinne sị na "ajọ ihe Ogbannaya mere bụ na ọ gara igboọgụ onye ọzọ ndị uweojii ahụ na-eti ihe nke mere ha ji sụọ ya ikeegbe.
Ya bụ akwụkwọ sị na onyeisi ndị NBA enyela ikike ka ndị otu ha tinye anya n'ala sowe ya bụ ajọ agwa akpasara onye otu ha.
BBC Igbo kwukwara ya bụ nwaamadị bụ Ogbonnaya Obasi bụ onye sị na ya si ụlọogwu ebe ọ gara nyocha ahụ alọta.
Obasị sị na ndị uweojii ahụ tiwere ya ihe ebe ya na-arịọ ha biko ka ha kwụsi iti nwoke ọzọ ihe.
Ọ si na ya agaghị amata ndị uweojii mere ya bụ ihe maka na ha gbapụrụ ozugbo buru nwaamadị nke ọzọ gbapụ n'ụgbọala ha, mana na ọ nwere ndị na-arịọ ya mgbaghara n'ekwentị mana na ya sị ha bịa ka ya hụ ha anya.
Ka ọ dị ugbua, na-akwụkwọ nke ya, ọnụ na-ekwuru ndị uweojii n'Anambra steeti bụ Haruna Mohammed sị na obi adịghị onyeisi ndị uweojii na steeti ahụ bụ John B.Abang mma maka agwa ọjọọ ndị ọrụ ya kpasara Ogbonnaya.
Ọ sị na Janga enyela ikike ka malite nchọpụta maka ndị mere ya bụ ihe ma taa ha ahụhụ dịka okwesiri.
Ihe nkiri ebe ndị ụweojii na-eti Okaikpe Ogbonnaya Obasi ihe na-efegharị na Soshal midia kemgbe ụnyahụ.
Akụkọ ga-amasị sị
A wakpoola ụlọahịa m n'Aba - Jane Ogbuata
Azọpụtala ụmụakwụkwọ ndị ntọ tọrọ na Kaduna steeti
Mụ na Buhari? Nke a bụ asịrị
Lee ihe akụ ọnatarachi jupụtara n'Enugu State
Gịnị kpatara ndị ọkaiwu ji ekpu 'wig'?
Bobrisky o ji ike dimkpa kụpụ nwoke suru ụgbọala ya ntị?